Date My Pet » Top US Cities nokuda Single Women
Kune vamwe zvinoita kuti nzvimbo yakakodzera vakadzi kuroora; nzvimbo huru hangout, mabasa kuti kubhadhara zvakanaka, zvakanaka kutarira uye zvinofadza vakomana kuroora, zvokudya utano zvirokwazvo vamwe vavo. Maguta vakadzi ava vanosarudza kurarama vanofanira kuva vazhinji zvinhu avo kana kwete zvose. Mazita pamusoro US maguta vakadzi kuroora muchawana pazasi chaagadzirirwa kufunga zvakawanda zvakadaro.
1. Chicago: pano, Vakadzi vanogona kunakidzwa akakwana guru mararamiro; chinhu guta noutano zvechokwadi, asi haana manyawi akafanana New York City. Chitown, sezvo vanhu veko kufara kureva guta sezvo, ari nomusimboti runako, tsika uye nhoroondo. Kamwe muri muguta rino, iwe chete kuvenga kuisiya; zviri akaremerwa trendy nharaunda uye Vakamupfekedza mahombekombe.
saka, rakanaka sei Chicago chaizvo kuvakadzi chete? oprah Winfrey, zvikuru vakapemberera vakadzi vasina iyi nyika, anogara pano; ichi vanofanira kupindura kuti guta chinofadza zvokuti iwe kurarama.
2. Los Angeles: Kana uchida kuti tinakidzwe noupenyu zvizere somukadzi chete, unogona kufunga vaigara Los Angeles. Nyika ino rakavanzika izere nevarume akatsvinda uye naka; saka, kamwe muri pano, kuwana munhu anonakidza kuti kutamba haringavi dambudziko.
Chimwe ndinoiitawo guru yeguta ndiyo incredible okunze naro Anonakidzwa kuburikidza gore rose. Yakanaka okunze acharamba kuramba iwe pamatunhu midzimu uye iwe uchava simba kuti vakawanda pamunenge pashure basa. L.A. hauzoregi ukaita zvose kubva Celeb sightings mungoro kuti kurova pamahombekombe.
3. Boston: Vakadzi Single vanowana Boston achigamuchira pasinei nezera boka ndevenyu. For vadzidzi, guta rine nomukurumbira mumayunivhesiti apo vanogona kuti pachavo vakanyoresa paChikoro. Kana muchida kunotenga uye nguva dzose vanoda kupfeka chinhu trendy, pane Newbury Street, nzvimbo yakakwana yokutenga mugadziri nguo.
Kana uri mumwe wevaya vanoda kungomberereka kumativi uye kufara, guta rine migwagwa yakawanda kwenhau, mamiziyamu, namaberere, horo nemapaki.
4. San Diego: San Diego kwagara guta nemitambo mamwe mukare nzvimbo imi achazombozadzika kuyambuka. saka, kana uri kuroorwa uye vanoda kuva pokumbozvidya zvinofadza muupenyu hwako, unogona kufunga kutamira San Diego.
Guta rakakomberedzwa nePacific Ocean, mumarenje nomumakomo; ichi chinoreva, kana totaura dzakakodzera kuenda kufambidzana nomumwe munhu, pane hwakakwana nzira kusarudza kubva. San Diego inewo kumba kuti zvechokwadi musingadanwi anonzwa Downtown.
5. Las Vegas: zvichida mikana yako kuwana nzvimbo yakakodzera shamwari ndiyo soro kana uri Las Vegas. Maererano 2013 Nyaya yakabudiswa pamusoro Forbes, guta rino Nevadan ane chikuru nhamba yevanhu vasina kuti mukadzi mumwe chete kurarama mairi; nokuti mukadzi mumwe nomumwe chete, guta rine 1.34 varume. Aya guta anoita Las Vegas chechi5 entrant pazvinhu izvi zvakarongwa pamusoro US maguta kuvakadzi chete.
vakadzi vose kunze uko vari kuroora uye kuronga kugara pasi ari chero apa maguta zvirokwazvo vane ichazununguswa upenyu.